Axad, Sebtembar 24, 2006 Axad, Sebtembar 24, 2006 Douglas Karr
Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaan ka shaqeynayay astaanta iyo qorshaha ganacsiga / shuruudaha Compendium Software, oo ah shirkad aniga iyo asxaabteena aan ku bilownay barnaamijka softiweerka bulshada. Tani waa waqti xiiso badan. Waxaan xoogaa dareen ah ka helnay shirkadaha VC, waxaan leenahay aragti wax soo saar fiican great waxa kaliya ee aan u baahanahay waa waqti! Labadeenaba waxaan shaqeynaa waqti buuxa sidaa darteed waa caqabad in laqabto.
Shalay waxaan u dhisay astaanta shirkadda. Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay!
Fiiri ah site qeexitaanka Compendium.
Miyaan wax ka qorayaa rootiga?
Sep 24, 2006 at 3: 53 PM
Waxaan urayaa jiir. Jiir weyn oo ur xun AIM3 inuu sax ahaado. Raadintaydii Google waxay soo baxday quruxsan wasakh; Waxaan kula talin lahaa magac kale shirkadaada. Aniguba waan ordi lahaa. Ka fog Dhaqso u carar haddii AIM3 runti yahay asxaabtaada. Waxaad moodaa inaad tahay qof hufnaan iyo akhlaaq leh. Ma ahan. SMO-na wuxuu ku taagan yahay wadiiqadiisa weyn ee dufanka badan. Haddii aysan AIM3 ahayn… waan ka xumahay in aad qarxiso saaxiibkaa.
Sep 25, 2006 at 3: 04 PM
Way xoogaa midab badan tahay dhadhankeyga, oo lagu daray garaafku wax badan ayuu i xusuusinayaa xarigga DNA, halkii uu ka ahaan lahaa warbaahinta bulshada
Xidhiidhka "macluumaadka" wuxuu si toos ah ugu socdaa bartaada internetka; laakiin waxaan u maleynayaa in xiriiriyahan kaliya yahay meel haysta…
Waa inaan sheegaa inaan jeclahay astaantii hore ee Mac OS9 - isku darka weyn ee taabashada aadanaha, kumbuyuutarka, iyo saaxiibtinimada / is dhexgalka. Malaha wax sidaas oo kale ah?
Taasi waxay tiri, tani waa hal ra'yi.
Calaamadaha.com waa isha waxyi.